Sare u qaadista sinaanta lamaanaha iyo awood u siinta gabdhaha Pakistan - Equal Access International
Pakistan, Iyada oo lagaashanayo Sanduuqa Nabadda iyo Amniga Caalamiga
Markii aan ka soo qeybgalno Hujra-gaan oo ay soo abaabushay EAI, si fudud ugama hadli doono xuquuqda haweenka iyo waxbarashada haweenka, laakiin waxaan qaadi doonnaa tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu taageerayo laguna dhiirrigelinayo waxbarashada gabdhaha iyo awood-siinta haweenka. Tani waxay jabin doontaa fikirka ah in waxbarashada gabdhaha aysan muhiim aheyn. ”
-Hujra kaqeyb gala
La shaqeynta Sanduuqa Caalamiga ah ee Nabadda & Amniga (GPSF), ujeedka mashruucan wuxuu ahaa in loo beddelo aqoonta, dabeecadaha, iyo dabeecadaha ku saabsan xuquuqda haweenka ee ku saleysan diinta Islaamka. Barnaamijku wuxuu gaarey malaayiin dad ah FATA iyo KP, marka lagu daro tobanaan kun oo shaqsiyaad ah iyada oo loo marayo wacyigelin iyo waxqabadyo kaqeyb qaadasho. Lagu xoojiyay barnaamijka raadiyaha Talaabo Tallaabo (Kadam pa Kadam), EAI waxay si taxaddar leh u qaabeeysay u-doodid iyo nashaadyo wacyigelin ah oo ay kujirto warbaahinno kala duwan iyo ka-qeyb-gal toos ah oo bulshada ah maalmaha maalmaha u-doodista caalamiga iyo qaran sida 16-ka Maalmood ee Dhaqdhaqaaqa Ka-Hor-tagga Rabshada Jinsiga, Maalinta Xuquuqda Aadanaha, iyo Maalinta Haweenka Qaranka. Si kor loogu qaado saameynta iyo gaarista, EAI waxay la shaqeysay la-hawlgalayaasha maxalliga ah oo ay ku jiraan FATA Dhallin-yarada FATA iyo Tallaabada loo Kobcinayo Awoodsiinta Dadka.
Kulannada Xijra: Shan kulan oo ah 'Hujra Gatherings' waxaa si habsami leh u abaabulay kooxda 'EAI' ee beelaha Khyber Agency, Hay'adda Kurram, Degmada Sare Dir, Degmadda Bunir, iyo Degmada Swat iyada oo ujeeddadu tahay ka faa'ideysiga hab-dhaqameedka Jirga si loo kordhiyo fahamka dadweynaha ee xoojinta haweenka, wada noolaanshaha bulshada, xuquuqda aadanaha, iyo waxbarashada gabdhaha.
Riwaayadaha Mobilada. Shan bandhig masrax oo guur-guura ayaa lagu guuleystey in lagu dhigto Jaamacadda Bacha Khan Charsadda, Tameer e Watan School iyo Kuliyadda Gabdhaha Mandian Hazara, Kulliyadda Shahaadada ee Dowladda ee Abbottabad, Kuliyadda Ganacsiga Jinnah Mansehra, iyo Jaamacadda Comsats ee Technology Technology Abbottabad. Cinwaanka ciyaarta la qabtay wuxuu ahaa Bawar, kaas oo micnaheedu waa aaminaad. Ciyaartu waxay kahadashay caadooyinka dhaqamada xun-xun ee dulmanaya dumarka iyo gabdhaha iyadoo lagu hayo hoy la’aan, aan waxna qorin ama aan awoodin inay kaqeybgalaan nolosha dadweynaha. Kaliya xukunkan ayay ragga “aaminaan” gabdhahooda iyo naagahooda. Ciyaartu waxay banaysay khilaafkan.
Riwaayadaha waxaa qabtay qoraaga caanka ah ee Pashto, Mr. Noor Ul Basher Naveed, oo habeeyey shirqoollada si ay uga tarjumaan baahiyaha maxalliga ah iyo duruufaha ku saleysan goobta juquraafi ahaan ay ka soo jeedaan. Mid ka mid ah guulaha muhiimka ah ee kooxdeena maxalliga ah ee EAI waxay ahayd riwaayadaha tiyaatarka mobilada guuriga ah ee Urdu kaasoo loo habeeyay kaqeybgalayaasha ka tirsan suunka Hazara, halkaas oo inta badan kaliya fahmaan luqadda Urdu.
Ciyaaraha Galas: Shan galan oo isboorti ah ayaa lagu abaabulay Degmada Swat, Jaamacadda Comsats Abbottabad, Wakaalada Malakand, Mansahra, iyo wakaalada Khurram ee FATA si dhalinyarada loogala hadlo doodaha wanaagsan iyo howlaha ku saabsan xuquuqda haweenka, doorka haweenka ee bulshada, iyo saameynta xun ee rabshadaha haweenka gabdhaha. Ciyaaraha galasku waxay caan ku ahaayeen carruurta, macallimiinta, iyo shaqaalaha dugsiga.
Kooxaha Dhageysiga Dhageysiga (LDGs): Dhammaan xubnihii kooxda dhageysku waxay si firfircoon uga qayb qaateen shirarka waxayna si furan uga wada hadlayeen had iyo jeer mowduucyo aan la aqbali karin oo xubnahu aqoonsadeen, oo ay ka mid ahaayeen
Xuquuqda Haweenka ee Islaamka
Dhalinta ee horumarka qaranka
Xuquuqda waxbarasho iyo xarumaha caafimaadka ee gabdhaha
Dowry - saamayntooda togan iyo mid taban iyo raadkeeda dhaqaale ee bulshada dhexdeeda
Ganacsi iyo maamul ganacsi oo yar yar oo isku filnaasho ah
Haweenka iyo tacliinta sare
Doorka haweenka ee siyaasada qaranka
Filim Telefishan: Kadib weeraradii ay mintidiintu ku qaadeen Jaamacadda Bacha Khan, dhammaan jaamacadaha waxaa loo xiray arrimo la xiriira amniga. EAI waxay si deg deg ah ugu tiirsan tahay habka kaqeybgalka bulshada ee laga soo bilaabo tiyaatarka wadada ilaa filim. Waxay ahayd mid aamin ah oo wax ku ool ah in lagu gudbiyo fikradaha iyada oo loo marayo telefishin gaar ah oo firfircoon. Kooxda ayaa qortay soona saartay filim 60-daqiiqo telefishan ah oo cinwaankiisu yahay, Bawar. Filimka waxaa laga sii daayay shabakado telefishan oo la xushay oo ay ku jiraan AVT Khyber TV, Pashtu 1TV, Sabawar HD, iyo TV-ga Afgaanistaan ​​ee aagagga ay maamusho dowladda dhexe ee federaalka (FATA) iyo gobolka KP, iyadoo la gaarsiiyay qiyaastii 30 milyan oo qoys. Filimkan ayaa lagu dhajiyay Facebook iyo YouTube, waxaana filimka la daawaday in ka badan 30,000 oo jeer iyadoo la adeegsanayo aaladaha warbaahinta bulshada ee kaladuwan.
152 + Kun
dadku waxay gaareen farriimo riixaya codka maqalka oo ku saabsan xoojinta haweenka iyo waxbarashada gabdhaha
dhagaystayaashu waxay gaadhay idaacadaha raadiyaha
30 + Kun
daawadayaasha ayaa filimka TV-ga ka galay warbaahinta bulshada
Tele Film Bawar waa sida codka nabada. Waxay u abuurtaa muuqaal wanaagsan Pashtuns adduunka oo dhan ... kor u qaadida awoodsiinta haweenka. Waxaan ahay qof carrab la 'oo aan bogaadinayo howsha weyn ee noocan ah oo ay bilowdey EAI ee ku saabsan waxbarashada gabdhaha iyo awoodsiinta haweenka.	 Mudane Afzal Khan
Saxafi, Wakaaladda Bajawar